Xildhibaan Abuukaato oo sheegay in xildhibaannada mooshinka wada ay doonayaan gacan tag – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAXildhibaan Abuukaato oo sheegay in xildhibaannada mooshinka wada ay doonayaan gacan tag
Xildhibaanku waxaa uu sheegay kuwa uu ku tilmaamay qas wadayaal in aysan heysan tiro ku filan sidaas darteedna ay doonayaan in ay gacantaag u dhacdo mooshinka ka dhanka ah guddoonka golaha shacabka Soomaaliya.
Mooshinkan oo soo billowday 14kii Bishan ayaa heysta kaliya ilaa 24ka Bishan waxaana haddii xilligaas la gaaro oo noqonayaa mid dhacaya.
Guddoomiye Jawaari ayaa XIldhibaannada Mooshinka ka keenay ka codsaday in ay tirada dhameystirtaan 10 maalmood gudahood sida uu qaba xeer hoosaadkana ay mooshinka geeyaan Golaha shacabka.
Waxaa uu Guddiyada joogtada ah ee Golaha shacabka ugu baaqay in ay waqti mucayin ah u qabtaan waqti cod u qaadidda Mooshinka lana geeyo meel dhex dhexaad ah isaga oo intaas ku daray in loo baahanyahay in ay kor joogto ka noqdaan beesha Caalamka iyo Culimada Soomaaliyeed.
41,875 total views, 2,628 views today
41,875 total views, 2,628 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
41,947 total views, 2,627 views today
41,947 total views, 2,627 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
41,959 total views, 2,627 views today
41,959 total views, 2,627 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
41,983 total views, 2,627 views today
41,983 total views, 2,627 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
42,011 total views, 2,624 views today
42,011 total views, 2,624 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]